China ladies 'ababezenzile fashion Cardigan mveliso kunye nabenzi | WG
I-cardigan yefashoni yabasetyhini
Uhlobo: Umsonto we-cardigan wabasetyhini obahlukileyo ngombala ohlukileyo
Inkqubo: 7GG umahluko wombala we-intarsia
Izinto: Umtya oqaqambileyo
Phawu: yamandulo, ekhethekileyo, ethambileyo
Siza kuzama ukwenza i-WG ibe yenye yezona zinto ziphambili kubenzi baseTshayina kunye nabathumela iimpahla zelizwe iimpahla. I-WG eyasekwa ngo-2006, nguMnumzana Jeff Xiao, inikezele ngee-sweatshi ezinithiweyo ezisisiseko kunye nezinto ezintsha ezenzelwe amadoda, amaTyhini naBantwana kwiimarike zamanye amazwe.
I-WG yinkampani enomenzi wayo ukubonelela ngeesweta ngohlobo lwe-cardigan kunye ne-pullover ye-boutique yabasetyhini abaqondayo kunye nabesilisa bayo yonke iminyaka abanqwenela ikhabethe enesitayile nenobunkunkqele.
Ukusuka kwii-cardigans zabasetyhini ezentofontofo kunye nejezi zabasetyhini zomqhaphu ukuya kwiimpahla zethu eziqhelekileyo ezinxitywayo, iimpahla zethu zamanenekazi ziya kukuthatha ngokulula ukusuka kwixesha ukuya kwixesha lonyaka.
Iikhadigidan zeWG zamvanje zezangoku kunye nesitayile. Banqumle ngaphezulu kwelokhwe yeli xesha okanye isibini esityikitywe ngedenim ngendlela ekhululekile. Jonga okumangalisayo kuqokelelo lwethu lweekhadigadi! Khetha enye yeqoqo lethu elibanzi lekhadigadi: iklasikhi, ngaphezulu okanye ukujija enye.
Jonga kwimigca emide yekhebhethi yekhadiyadi yakho enesitayile ngaphezulu kwesinxibo sakho osithandayo kunye nabaqeqeshi ngenkangeleko elula nebalaseleyo. Yibambe enye yee-cardigans zethu ezinamaqhina amakhulu ukuze uzigcine ubushushu ebusika.
MOQ: Isiqwenga se-1 samkelekile
I-WG yenza isiqwenga esi-1 ngombala ngamnye endaweni yokujonga ii-odolo. Ufuna, sinikezela, ukuhlangabezana nokwoneliseka kwakho. Sinike umfanekiso, nangona inkcazo yomlomo, iimveliso zakho ezizithandayo zingenziwa ngokwezifiso. Sineqela lokuhlola umgangatho wobungcali, ulawulo olungqongqo lomgangatho kufuneka lwenziwe ngokuhlolwa kwemigangatho emininzi kunye nokuvavanywa, ngokuhambelana nemigangatho yamanye amazwe. Ukusuka kuyilo, isitayile, ubungakanani, kwanophawu lwentengiso, iilebhile zokuhlamba, ukupakisha, kubalulekile ukugcina isitayile sokuqala okanye ukutshintsha ngokweemfuno zakho.
Egqithileyo Utywala bokwenza isityalo eDalang-ijezi yokhuseleko efanelweyo, ijezi yesikhululo seenqwelomoya
Okulandelayo: Ijezi enamacala amabini yeJacquard
Ukuqokelelwa kweeJesi zamadoda
Ijezi enamacala amabini yeJacquard
Ijezi yabasetyhini ebhinqileyo
Elungiselelweyo siko-iziqwenga iziqwenga ezintathu umnqwazi, sc ...